ILa Réunion iyenyuka isantya kwiSeychelles Phambi kweAir Austral Inqwelomoya eNtsha
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseSeychelles ezaphulayo » ILa Réunion iyenyuka isantya kwiSeychelles Phambi kweAir Austral Inqwelomoya eNtsha
Airlines • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Icandelo lokungenisa izihambi • iindaba • Iindaba zokudibana kwakhona • Iindaba zaseSeychelles ezaphulayo • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel
Ukuhlangana kunye neAir Australia
Iiseshoni zeentsuku ezimbini ze-“petit déjeuner de formation”, eziququzelelwe liqela leTourism Seychelles eLa Réunion ngokubambisana neAir Austral nge-17 kaNovemba ne-19, 2021, zenzeke kwidolophu yaseSaint Denis naseSt. Isibhengezo esamkelwe ngabakwa-Air Austral sokuphinda baqalise inqwelomoya yabo yeveki ukuya eSeychelles nge-19 kaDisemba ka-2021.
Iintloko zeemveliso kunye nabalawuli beenkampani zorhwebo zokuhamba kwesi siqithi baye badibana ukuze bahlaziye iiseshini zoqeqesho kwindawo ekuthengiselwa kuyo, iimfuno zokungena kwezempilo kwi-COVID-19, iimeko zokuhlala zabahambi, kunye noshwankathelo ngophuhliso lwemveliso kwindawo ekusingwa kuyo ukusukela oko ukuvulwa kwe Seytshels umda. Iiseshoni, eziqhutywe nguBernadette Honore, uMlawuli oPhezulu weNtengiso yezoKhenketho eSeychelles eLa Réunion, zijolise ekwakheni amandla kunye nomdla phakathi kwabenzi bezigqibo zorhwebo zokuhamba kwesebe laseFransi kunye nokwakha ukuzithemba kwindawo ekuyiwa kuyo ngaphambi kweenqwelomoya eziya eSeychelles kwinyanga ezayo. .
“Ngalo lonke eli bhubhane, besisoloko sihlaziya iingcali zorhwebo kwezohambo, ngakumbi ngokubhekisele kwimithetho yezempilo ye-COVID-19 kunye neemeko zokuhlala zabahambi. Ukuba nonxibelelwano lomntu nomntu kunye nabenzi bezigqibo kurhwebo lokuhamba eLa Réunion kunceda ekwakhiweni ngokutsha ubudlelwane, obubandakanya ishishini lethu, kwaye okona kubaluleke kakhulu, ukufaka ukuzithemba kwabo ekuthengiseni. Iingcali zokurhweba ngohambo zingamaqabane aphambili ekwandiseni imiba yomthwalo wenqwelomoya. Ukufumana ukuzibophelela kwabo ekuqaliseni ukuthengisa kwakhona eSeychelles ngeli xesha ngeli xesha kubalulekile kwindawo ekusingwa kuyo kunye nokuphindaphindwa kwetrafikhi yabatyeleli ukusuka eLa Réunion ukuya eSeychelles, utshilo uNksz Honore.
Abameli be-Air Austral nabo babekho ngexesha leeseshoni ezimbini, bebonisa i-airline entsha yeenqwelo zeenqwelo-moya ezinikezelwe kwiindlela zengingqi ezibandakanya i-Seychelles kunye nokukhuthaza iingcali ezikhoyo ukuba zityhalele ukuthengisa eSeychelles.
Zombini iiseshini zazinobomi ngemibuzo, ngakumbi malunga nempilo kunye neemfuno zokungena kunye neemeko zokuhlala zabahambi.
Ekupheleni kweeseshoni, iingcali zorhwebo zokuhamba zaseLa Réunion zabonisa ukwaneliseka kwabo ngokufumana ulwazi olwaneleyo ukuba bangadluliseli kwi-clientèle yabo kuphela, kodwa okona kubaluleke kakhulu, ukubanika isiqinisekiso sokuya eSeychelles.
Iiseshoni zoqeqesho ziyinxalenye yemisebenzi yokuthengisa eququzelelwa ngu Seychelles yoKhenketho eRéunion. Iindawo ezikumabonakude nazo ziza kuboniswa. Ukuqaliswa kwakhona kweenqwelomoya nge-19 kaDisemba kuya kubonelela ngamathuba kubahlali beSiqithi saseVanilla ukuba baye eSeychelles ukuze bajoyine iinqanawa zokuhamba ngenqanawa kumanzi eziqithi kunye nokuhlola iInner and Outer Islands.
Ukuqaphela ukuba iindwendwe ezingama-5,791 ezivela eLa Réunion zityelele iSeychelles ngo-2019 ngaphambi kobhubhane.